‘प्रधानन्यायाधीशलाई राजदूतमा पनि भाग’ - Dainik Hub Dainik Hub
‘प्रधानन्यायाधीशलाई राजदूतमा पनि भाग’
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ०७:१०
काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन् ।
‘उहाँले मन्त्रीमात्र होइन, राजदूतमा पनि भाग खोजिरहनुभएको छ। डा. तिलक रावललाई राजदूत बनाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो। पूर्वगभर्नर रावल मधेसवादी दलका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।
‘उहाँ (राणा) ले केही नाम सरकारी नियुक्तिका लागि भन्दै दिनुभएको छ, जसमा डा. रावलको नाम भारतका लागि नेपालको राजदूत भन्दै उल्लेख गरिएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। प्रधानन्यायाधीश राणा र रावलबीच सम्धी साइनो रहेको छ। राणाकी छोरी रावलका छोराले बिहे गरेका हुन्। सरकारले भारतलगायतका देशबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी भएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
केपी ओलीको सूचीमा अटाएनन् यी नेताहरु
कांग्रेसको गोलीधिवेशन: मन्त्री विवाद गर्ने, पिएसओ गोली चलाउने
सर्वसम्मत नभए विद्युतीय मतदान असम्भव
एमाले बन्दसत्र साँझ ७ बजेदेखि